अमेरिकी ‘अपवाद’ को पतन र चिनियाँ ‘अपवाद’ को उदय
scheduleशनिवारफाल्गुन १५ गते, २०७७
राजनीति, विचार, साझापोस्ट सिफारिस
वाङ सियाङ बेइ
बितेको दुई हप्तामा बाँकी विश्वले हैरानीका साथ अमेरिकी राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो संगटग्रस्त पतन देख्यो र स्मृतिमा ताजा राख्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थक हज्जारौंको भीडले लोकतन्त्रको पवित्र मन्दिर मानिएको क्यापिटल हिलमा गरेको आक्रमणको निहितार्थ विश्वमा लामो समयसम्म गुन्जिरहने छ ।
यो घटनाको तात्कालिक असर स्वतन्त्र निर्वाचन र सहज सत्ता हस्तान्तरणका ती मूल्य र मान्यताहरू माथि पर्‍यो जसलाई ‘अमेरिकी अपवाद’ को मापदण्ड मानिन्थ्यो, बाँकी विश्वले पछ्याउन योग्य ठानिन्थ्यो । सन् १६३० मा जोहन विन्थ्रोपले प्रयोग गरेको ‘पहाडमाथिको चम्किलो शहर’ अक्सर राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन उद्धृत गर्न औधी मन पराउँथे ।
चिनियाँ अधिकारी र जनताका आँखामा यी घटना त्यस्तो बेलामा भए जब यी दुई राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा एक चरम विन्दूमा छ । सत्तामा आउन लागेको जो बाइडेन प्रशासनले चिनियाँ अधिनायकवाद र निरंकुश शासनको प्रतिउत्तरमा साझा लोकतान्त्रिक अवधारणा राख्नेहरूको गठबन्धन निर्माण गर्ने अपेक्षा व्याप्त छ ।
क्यापिटल हिलमा उपद्रोको सबैभन्दा हैरानीपूर्ण पाटो यो हो कि यसले त्यो विभाजित अमेरिका देखाउँछ, जसमा सरकार र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वासहिनताको गुण प्रकट हुन्छ । अझ तिव्रतापूर्वक बढ्दै गएको विभाजन र द्वन्द्व साथै नश्लीय असमानता उदित हुन्छ ।
निसन्देह यो घटनाले बेइजिङ शक्तिको करिडोर र यसको गल्लीमा हिंडिरहेको मान्छेको दृष्टिकोणलाई अझ बलियो बनाउँछ । उसलाई पक्का यो लाग्ने छ कि अमेरिकी ‘अपवादवाद’ को पतन हुँदैछ, चिनियाँ ‘अपवादवाद’को उदय हुँदैछ ।
वाङ झियाङ बेइ
चिनियाँ नेताहरूका लागि यो भन्दा गज्जब राम्रो समय अर्को हुनै सक्दैनथ्यो किनकी उनीहरू जुलाई १ बाट शुरु हुने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शताब्दि वर्षगाँठको तयारीमा छन् । क्यापिटल हिलको उपद्रो र अवाञ्छित परिणाम चिनियाँ नेताहरूका लागि आफ्ना जनतालाई अमेरिकी प्रणाली पतन र लोकतन्त्र बिनै अधिनायकवादी शासन अन्तर्गत नै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले दिन सकेको स्थायीत्व र आर्थिक वृद्धिका उत्तम प्रमाण बन्नेछन् ।
निश्चय नै अमेरिकी प्रणालीको संस्थागत क्षमतालाई अझै पनि कम आँक्न सकिंदैन । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ । ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा दुईपटक महाअभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति बनेका छन् । तर यो सिनेटले पुरा गर्नुपर्ने एक लामो प्रक्रिया हो ।
ट्रम्प शासनको अन्तिम हप्ता के कस्तो होला भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ । आगामी बुधवार ट्रम्पले बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अमेरिकाका ५० वटै राजधानी शहरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सपथ ग्रहण समारोहका लागि मात्र २० हजार नेशनल गार्ड तैनाथ गरिने छ ।
मानौं कि बिना समस्या बाइडेनले सत्ता प्राप्त गर्नेछन् तथापि उनीले एक आँधीमय समयको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने छ । विशेषतः सरकार, राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्ने छ ।
अर्थोक जे भए पनि अमेरिकालाई अब लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताबारे अरु देशलाई अर्तिउपदेश र भाषण दिन निक्कै गाह्रो काम हुनेछ ।
हालसालै, चीनले भने आफ्नो विशाल सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासतका बीच शान्तिपूर्ण र चयनात्मक उदयका लागि आफ्नै प्रकारको भाष्य निर्माण गरेको छ । चिनियाँ अधिकारी र विश्लेषकहरूको तर्क छ कि ‘चिनियाँ अपवादवाद’ को अर्थ त्यो चीन हो, जसको जरासम्म कन्फुसियसवाद छ र त्यसले द्वन्द्व निवारण सामञ्जस्यताको क्षमता राख्दछ । चीनले शक्ति राष्ट्रका रुपमा विश्व प्रभुत्व कायम गर्न पश्चिमा राष्ट्रहरूको जस्तो युद्धउन्मादी बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी छैन ।
उदारणका लागि चिनियाँ बुद्धिजिवी तथा सार्वजनिक बौद्धिकहरू बारम्बार भन्छन् कि हान वंशीय चिनियाँ शासनसँग वैदेशिक हस्तक्षेपको भिन्नै परम्परा थियो । जस्तो कि १५औं शताब्दिको प्रारम्भतिर झेन हेले नेतृत्व गरेको मिङ वंशीय शासनले पश्चिमी प्रशान्त र हिन्द महासागरसम्म पुग्न ७ वटा ठूला आरोहण अभियानहरू चलाएको थियो । ती आरोहणहरूको उद्देश्य सम्राटको शक्ति र वैभव पश्चिमा विश्वलाई देखाउनु थियो । तर ती आरोहणहरू हतियारको साटो व्यापारिक फाइदा र औपनिवेशिक अवसरहरूको उपयोग गर्ने तरिकाका थिए ।
चीनको ग्रेटवाललाई पनि आक्रमणको साटो प्रतिरक्षा गर्ने चिनियाँ माइण्डसेटको प्रतीक मान्ने गरिन्छ ।
देशभित्र र बाहिर दुवैतिर यो अपेक्षा थियो कि चार दशक लामो स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको प्रयोगले पारदर्शी आर्थिक बेछि, आर्थिक स्वतन्त्रता हुँदै राजनीतिक उदारीकरणलाई समेत प्रवर्द्धन गर्नेछ । तर यी अपेक्षाहरू सन् २०१२ मा सि जिन पिङको उदयसँगै शिथिल भएका थिए ।
त्यसयता चिनियाँ नेतृत्वले समाजका सबै तहमा पार्टीको नियन्त्रणलाई अझ बढाएको छ । साथै यो दाबी गरेको छ कि पार्टीले देशका सबै चिजहरू नियन्त्रण गर्न सक्दछ । सि जिन पिङ बारम्बार चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादप्रति आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने गर्दछन् । समाजवाद, पार्टी सिद्धान्त, राजनीतिक प्रणाली र संस्कृतिलाई पार्टी सिद्धान्तका रुपमा ‘चार विश्वासहरू’ भन्ने गरिन्छ ।
यद्यपि चीनको बाह्य सम्बन्ध भने बिग्रँदै गएको छ । ट्रम्पको अकल्पनीय शासनकालमा दुई देशबीचको स्वतन्त्र सम्बन्धमा निक्कै गिरावट आयो । तर बितेका चार वर्षमा चीन र सि जिन पिङको नेतृत्वको अनुकूल र फाइदाजनक घटनाक्रम कम रहेनन् । उदाहरणका लागि कोभिड–१९ को महाव्याधीलाई नै लिन सकिन्छ ।
कतिपय पश्चिमा सञ्चार माध्यमले यसलाई प्रारम्भमा सोभियत संघको सन् १९८६ को चेर्नोभिल आणविक भट्टी दुर्घटनाजस्तै ठानेर आलोचना गरे । यो काण्डले सोभियत संघको पतनमा ठूलो भूमिका गरेको थियो ।
तर करिब ३ हप्ता नबित्दै चिनियाँ अधिकारीहरूले व्यापक प्रतिरोध रणनीति तयार गरे । कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न चीन सफल भयो र जनजीवन सामान्य गतिमा फर्कियो ।
जब कोरोना भाइरसको कारण विश्व नै थला पर्‍यो, चीनले भने अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरह्यो । गत आर्थिक वर्षमा पनि चीनको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रह्यो भने आगामी वर्ष ८ प्रतिशत हुने अपेक्षा छ ।
चीनमा अहिले कारखानाहरू पूर्ण उत्पादन क्षमतामा चल्दैछन् । निर्यात व्यापक छ । शेयर बजार तेजीमा छ । अमेरिकी डलरसँग चीनको युवानको टक्कर कडा हुँदैछ । चिनले देशबाट निरपेक्ष गरिबी छिट्टै निराकरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यी सबै कुराले चीनको राष्ट्रिय गौरव र देशशक्तिलाई व्यापक बढाएका छन् । साथै पार्टी प्राधिकारमा पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । अर्कोतिर यही बेला वासिङ्टनमा भने कोरोना नियन्त्रणमा असफलता हात लागेको छ र राजनीतिक उपद्रो देखापरेको छ ।
यो पृष्ठभूमिले सि जिन पिङलाई जुलाई १ को भिजिन तयार गर्न मद्दत गर्नेछन् । उनले यो भन्न सक्नेछन् कि अधिनायकवादी एकदलीय शासनका नियम र स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरूबीच एक विचित्र सामञ्जस्यक कायम गरी चिनले अद्वितीय मोडेल निर्माण गरेको छ र यो देशलाई विकासको नयाँ चरणमा अगाडि लान फलदायी हुनेछ ।
साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट भावानुवाद ।
वाङ सियाङ बेइclose
सभामुखको जवाफ- मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दुषित र कपटपूर्ण
बहुरंगी नेताहरुः बोली बदल्दै, आक्रोश पोख्दै
प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि सूर्य शान्त, शान्ता बुरुक्कै
बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीको हतारो
‘विश्वास मत खेर जाँदैन’
मन्त्रिपरिषद बैठकः २३ गते संसद बोलाउन सिफारित गर्ने निर्णय
सरकारले अविचलितरुपमा राष्ट्रका लागि काम गर्छः प्रवक्ता गुरुङ
समाजवादोउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रसर हुनुहोस्ः राष्ट्रपति भण्डारी
फिचर पोस्ट, राजनीति, विशेष
अब कति होला ओली सरकारको आयु ?
कसैले धारे हात लगाउँदैमा ओलीले राजीनामा दिनुहुँदैनः उपप्रम पोखरेल
कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन ओली १७ गते पोखरा उत्रने
नेकपा प्रमुख सचेतकबाट गुरुङलाई कारबाही, भट्टराईलाई जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद बैठक, यस्ता छन् एजेन्डाहरु
आगामी सत्ता समीकरणः के गर्दैछन् दलहरु ?
सर्वोच्चले नेकपाको नाममा रहेको विवादमा फागुन २० गते निर्णय सुनाउने
कांग्रेस पाँच वर्ष प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छः सिंह
लोकतन्त्र, संविधान र जनताका पक्षमा कांग्रेसले संसद्मा भूमिका खेल्छः निधि
देउवा भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगे भारतीय राजदूत
राष्ट्रपति भेट्न शीलतनिवास पुगे प्रधानमन्त्री ओली
पौडेलको प्रश्न- प्रधानमन्त्री अब कुन मुखले संसदमा जान्छन् ?
काठमाडौं, १४ फागुन । निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं, १५ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि...
काठमाडौं, १५ फागुन । विभाजित नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्ता विवादित...
काठमाडौं, १४ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार...
काठमाडौं, १४ फागुन । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ पदमुक्त गरेका...
काठमाडौं, १४ फागुन । मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको...
कुमारी इक्विटी फण्ड बिक्री गरिँदै
काठमाडौँ, १४ फागुन । सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न चाहनेलाई लक्षित गरेर यही फागुन १४ गतेदेखि कुमारी इक्विटी फण्ड बिक्री...
गलकोट, १४ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जनताबाट प्राप्त...